» सलाहको ह्याट्रिकमा लिभरपुलको विजयी सुरूवात, लिड्स युनाइटेड पराजित
०४ बैसाख २०७८
सलाहको ह्याट्रिकमा लिभरपुलको विजयी सुरूवात, लिड्स युनाइटेड पराजित
२८ भाद्र २०७७, आईतवार ०६:१७
मोहमद सलाहको ह्याट्रिकमा लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा विजयी सुरूवात गरेको छ । साविक विजेता लिभरपुलले शनिबार राति भएको यस सिजनको आफ्नो पहिलो खेलमा लिड्स युनाइटेडलाई ४-३ गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो ।
एनफिल्डमा लिभरपुललाई जीत दिलाउन मोहमद सलाहले ह्याट्रिक गरे । यस्तै भिर्गिल भान डाइकले एक गोल गरे । लिड्सका ज्याक ह्यारिसन,प्याट्रिक बामफोर्ड र माटेउ क्लीचले एक एक गोल फर्काए । खेलको चौंथो मिनेटमा सलाहले पेनाल्टीमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । १२औं मिनेटमा ह्यारिसनले गोल गर्दै लिड्सलाई १-१ गोलको बराबरीमा ल्याए । २०औं मिनेटमा भान डाइकले गोल गर्दा लिभरपुल २-१ ले अघि रह्यो । ३०औं मिनेटमा लिड्सका प्याट्रिकले गोल गर्दै खेल २-२ को बराबरीमा ल्याए ।
३३औं मिनेटमा सलाहले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पहिलो हाफमा लिभरपुललाई ३-२ को अग्रता दिलाए । खेलको ६६औं मिनेटमा क्लीचले गोल गर्दै लिड्सलाई ३-३ गोलको बराबरीमा ल्याए । तर, खेलको ८८ औं मिनेटमा सलाहले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत तेस्रो तथा ह्याट्रिक गर्दै लिभरपुललाई ४-३ को जीत दिलाए । यससँगै सलाह प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी बने । च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्दै प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको लिड्सले भने हारबाट सिजनको सुरुवात गरेको छ ।
मुनु सिग्देललाई सोधियो स्पष्टीकरण
हाल नेपालमा १०० कोरोना संक्रमितको आईसीयूमा उपचार हुँदै, कुन प्रदेशमा कति ?
बिनाभिसा नेपाल प्रवेश गर्न लाग्दा दशगजाबाट समातिए दुई चिनियाँ नागरिक
विश्वास लिएको भोलिपल्टै आउन सक्छ अविश्वास प्रस्ताव !
गोकुल बास्कोटालाई लेखा समितिबाट फिर्ता गर्न माग
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै
स्थानीय र पश्चिमी वायु सक्रिय : आज र भोलि असिना पानीको सम्भावना
विदेशी भूमिमा नेपाली श्रमिकको व्यथा समेटिएको ‘सनैया’को चर्चा